သမ္မတကြီးထံပေးစာ - A Letter To The President
တရားဥပဒေအထက်မှာ ငွေဟာ တကယ်ပဲရှိနေပြီလား ? သမ္မတကြီးဆီကို တိုင်စာတစ်စောင်ပို့ခဲ့တဲ့ အမှုတစ်ခု ... နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင် ပြန်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အမှုတစ်ခု ...
တရားဥပဒေအထက်မှာ ငွေဟာ တကယ်ပဲရှိနေပြီလား ?
သမ္မတကြီးဆီကို တိုင်စာတစ်စောင်ပို့ခဲ့တဲ့ အမှုတစ်ခု ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင် ပြန်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အမှုတစ်ခု ...
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟာ ဥစ္စာဓန ပြည့်စုံသူ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသူဆိုရင်တော့ သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေကို သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ အာဏာ၊ ဥစ္စာတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ရင်း အပြစ်မဲ့သူတွေကို ဒုက္ခပေးတော့တာပါပဲ။
ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ ...
အလင်းရောင် ၊ ချမ်းမင်းရဲထွဋ် ၊ ဖွေးဖွေး ၊ မေဆူးမောင်